Tokony hijoro amin'ny olana ara-tsosialy ve ny marika? | Martech Zone
Tokony hijoro amin'ny olana ara-tsosialy ve ny marika?
Alakamisy, May 25, 2017 Alakamisy, May 25, 2017 Douglas Karr
Androany maraina, nanala marika iray tao amin'ny Facebook aho. Nandritra ny taona lasa, nivadika ho fanafihana ara-politika ny fanavaozan'izy ireo, ary tsy naniry ny hahita izany negativa izany intsony aho. Nandritra ny taona maro dia nizara ampahibemaso ny fomba fijeriko ara-politika aho. koa. Nijery aho fa ny fanarahako dia novana ho olona maro kokoa izay nifanaraka tamiko fa ny hafa izay tsy nanaiky tsy narahina ary tsy nifandray tamiko intsony.
Nahita ireo orinasa nifaneraserako niala tamin'ny fiaraha-miasa amiko aho, raha nisy marika hafa kosa nampitombo ny fifampiraharahana tamiko. Fantatrao izany, mety ho gaga ianao amin'ny fahafantarana fa nanova ny fisainako sy ny paikadiko aho. Ny ankabeazan'ny fifampiraharahana ara-tsosialy navoakako ankehitriny dia manome aingam-panahy sy mifandraika amin'ny indostria fa tsy tototry ny fiaraha-monina sy ny politika. Fa maninona Noho ny antony vitsivitsy:
Manaja ireo manana fomba fijery hafa aho ary tsy te handroaka azy ireo.
Ny zavatra inoako manokana dia tsy misy akony amin'ny fomba itondrako ireo izay tompoiko… koa nahoana no avelako hisy fiantraikany amin'ny orinasako izany?
Tsy namaha izany afa-tsy ny fanitarana ny banga fa tsy ny fampitana azy ireo.
Ny tsy fifanarahana am-panajana amin'ny olana ara-tsosialy dia maty ao amin'ny media sosialy. Voatafika noho ny fanafihana mahery vaika sy fanaovana ankivy ny marika ankehitriny rehefa hita ny fihetsika rehetra na fantatry ny besinimaro aza. Ny fiarovana na adihevitra rehetra dia milentika haingana amin'ny fampitahana famonoana olona na fiantsoana anarana hafa. Diso ve aho? Ity angon-drakitra ity dia mampiseho fomba fijery vitsivitsy fa maro ny mpanjifa tsy miombon-kevitra ary mino ny marika maro kokoa tokony hanana ny tena izy ary ampahibemaso amin'ny olana ara-tsosialy.
Ny Havas Paris / Paris Retail Week Shopper Observer dia nahitana fironana telo izay niavaka tamin'ny fanovana ny fifandraisan'ny marika sy ny mpanjifa frantsay:
Mino ny mpanjifa fa izao ilay adidin'ny marika maka toerana amin'ny olana ara-tsosialy.
Te-ho mpanjifa valisoa manokana amin'ny marika iarahan'izy ireo miasa.
Ny mpanjifa dia mitaky ny vokatra tokony hisy roa an-tserasera sy ivelan'ny Internet.
Hafa angamba ny hevitro satria efa ho dimampolo taona aho. Raha ny fahitako azy dia misy fifanoherana ao amin'ny angon-drakitra izay ampahatelon'ny mpanjifa ihany no maniry hanana marika ara-politika ny marika na eo aza ny olana ara-tsosialy rehetra lasa lalao politika. Tsy azoko antoka fa te-hiaro marika iray aho izay milaza am-pahibemaso ny fijoroany amin'ny olana ara-tsosialy. Ary ahoana ny amin'ny fihetsika ara-tsosialy mampiady hevitra izay mampisaraka ny fototry ny mpanjifa? Heveriko fa ny fanambarana voalohany dia mety mila soratana indray:
Mino ny mpanjifa fa adidin'ny marika izao ny miana-javatra amin'ny olana ara-tsosialy… raha toa ka miombon-kevitra amin'ny mpanjifa ny fijoroan'ny marika momba ny fanatsarana ny fiaraha-monina.
Tsy manana olana amin'ny orinasa manohana manokana ny olana ara-tsosialy aho, saingy tsy afaka ny tsy hanontany tena aho raha ny fanerena ny marika haka toerana no hampiasaina hanomezana valisoa na hanasazy azy ireo ara-toekarena noho ny hevitr'izy ireo. Ny ankamaroan'ny olana ara-tsosialy dia mifototra fa tsy kendrena. Toa tsy fandrosoana izany amiko - toa fanararaotana izany. Tsy te ho teren'ny mpanjifako haka toerana aho, hanakarama ireo izay miombon-kevitra amiko fotsiny, ary ireo izay mitovy hevitra amiko ihany no tompoiko.
Ankafiziko ny fahasamihafan'ny hevitra fa tsy ny fihevitry ny vondrona. Mino aho fa ny prospect, ny mpanjifa ary ny mpanjifa dia mbola mila ary mila fikasihan'olona fa tsy mandeha ho azy, ary te hahazo valisoa manokana sy eken'ireo marika nandaniany ny dolara azony ireo.
Ka noho izany, mijoro miandany amin'ity resaka mampiady hevitra ity ve aho?
Ny fandinihan'ny Shopper Observer, Eo anelanelan'ny AI sy ny politika, ny maha-zava-dehibe ny toetran'ny olombelona ho an'ny mpanjifa, notarihin'ny Paris Retail Week niaraka tamin'ny Havas Paris.
Tags: marikamarikaHavas Parisvarotra ivelan'ny InternetMpanaraka mpivarotra fivarotana herinandro any Parispolitikafivarotana antsinjaranyfivarotana varotrampaninjaravalisoaolana ara-tsosialytoerana ara-tsosialy
Saripika iray momba ny fitondran-tena mividy mpanjifa Omnichannel
May 25, 2017 ao amin'ny 2: 08 PM
Toy ny mahazatra. Hevitra tsara. Manaiky aho, miaraka amin'ny fanambaranao novaina momba izay tadiavin'ny mpanjifa. Mino koa aho fa marika marobe kokoa no ho sazin'ny besinimaro farafaharatsiny noho ny fijoroany, fa ny dolara kosa dia mety hanohana azy ireo amin'ny alàlan'ny mpanjifa fanampiny izay miombon-kevitra aminy manokana.
May 30, 2017 ao amin'ny 12: 09 PM
Fanambarana roa lehibe avy amin'ny lahatsoratranao izay mamintina izay eritreretiko momba an'io lohahevitra io, "Ny ankamaroan'ny olana ara-tsosialy dia foto-kevitra fa tsy kendrena" & "Ankafiziko ny fahasamihafan'ny hevitra fa tsy ny fihevitry ny vondrona". Heveriko fa ny ankamaroan'ireo izay polarized be loatra dia tsy mahatakatra fa ny hevitr'izy ireo dia tena izany, hevitra iray ary tsy afaka mihaino hevitra hafa izy ireo na manitatra ny faravodilanitra. Manaiky tanteraka aho fa tsy misy orinasa tokony hanery imasom-bahoaka ny fihevitr'izy ireo momba ireo olana ireo, na tena hiatrika valinteny izy ireo. Amin'ny maha orinasa ahy dia hilazako fa manana mpiasa tsy mitovy fomba fijery sy fijoroana aho ary mijanona ao ambadiky ny fahalalahana misaina ary manohana ireo mpiasa amin'ny sehatra rehetra amin'ny sehatra politika.